Dawlada Soomaaliya Oo War Ka Soo Saartay Go’aamadii Ka Soo Baxay Shirkii Midawga Afrika | Kaafi News
Dawlada Soomaaliya Oo War Ka Soo Saartay Go’aamadii Ka Soo Baxay Shirkii Midawga Afrika
Muqdisho(kaafinews):-Dawlada federaalka ah ee soomaaliya ayaa war ka soo saartay sida ay u aragto shirkii midawga Afrika eek u soo xidhay mwadanka Itoobiya.
War ka soo baxay wasaarada arimaha debada ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawlada federaalka ahi soo dhawaynayso waxyaabaha layskula qaatay shirkii midawga Afrika ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday wadanka Itoobiya kaas oo uu madaxweyne Farmaajo-na ka qaby galay.
Warka ka soo baxay wasaarada arimaha debada soomaaliya ayaa lagu yidhi “Dawlada federaalka ah ee soomaaliya waxay soo dhawaynaysaa qodobada ka soo baxay shirkii midawga Afrika, waxaanay ku shaqeynaysaa dadaalada horumarinta iyo dib u habeynta hanaanka maamul maaliyadeed ee dalka,si loogu guuleysto qorshaha deyn cafiska ee Soomaaliya,si loo helo
horumar waara,go’aanka Midowga Afrika waxaa uu iftiiminayaa xidhiidhka iskaashi iyo taageerada ka dhaxaysa wadamada afrika.
Sidoo kale dawlada soomaaliya ayaa sheegtay inay wadamada Afrika ku tixgalinayso muhiimada ay siinayaan doorka ay soomaaliya ku leedahay Midawga Afrika iyo taageerada ay la garab taagan yihiin.
Sidoo kale soomaaliya ayaa warkeeda intaas raacisay “Dawladda Federaalka Soomaaliya waxaa ay taageersan tahay qaraarka ka soo baxay shirka Midowga afrika ee sanadka,kaasi oo muhiimad gaar ah ugu fadhiya guud ahaan ururka iyo gaar ahaan,Soomaaliya,kuwaasi oo kamid ahaa xaaladaha kaladuwan sida Nabadda Amniga,iyo arrimaha bani’aadanimo, iyo dhamaan dadaalada ku aadan aragtida ku dhisan dhaqangelinta qorshayaasha horumarnineed ee qaaradda” ayaa lagu yiri qoraalka.